FJKM Ambonin’Ampamarinana – FJKM
150 taona lasa izay no nisian’ny Fiangonana voalohany teto Ambonin’Ampamarinana
Nandimby ny mpitandrina Randzavola ny mpitandrina Johanesa Rakotovao, izay pastora loterana tany am-piandohana. Tamin’ny androny no nitsanganan’ny Sampana Vokovoko Manga (1959)sy nivoahan’ny gazety Fianaran-tsoa. 430 no isan’ny Mpandray voasoratra ho mpifidy tamin’ny fifidianana azy. Mpamita iraka matetika any ivelany ny mpitandrina Randzavola sy Rakotovao ka dia nisy loholona nisolo azy ireo tamin’izany, tena mpisolo mpitandrina tokoa. Nanomboka ny taona 1953 dia ing. Rasolofo Joseph 1 no tonian’ny Fiangonana ary tsy nitsahatra izany raha tsy tamin’ny avrily 1972 ; ny mpitahiry vola kosa dia Razafimbadà (1953-1957) nodimbiasan-dRasolofo Jean (1957-1967). Nanomboka ny taona 1958 dia tsy nisy intsony ny Distrikan’Ambonin’Ampamarinana izay nanomboka tamin’ny 1864 fa lasa I4B. Nisy ray aman-dreny tena to teny tamin’ny Fiangonana tamin’ity vanimpotoana ity dia Ing Ratsisalovanina Edmond sy Raveloson Georges ary Rakotoarison.
MMMmpitandrina roa no nifandimby nitondra ny Fiangonana dia Rakotonarivo sy Rasolomanana Nehémie. Nanomboka ny volana aogositra 1968 dia nisalotra ny anarana FJKM Tranovato Ambonin’Ampamarinana ny Fiangonana ary dia nitondra ny Sinodam-Paritany Ambonin’Ampamarinana izy hatramin’ny taona 1996. Nanomboka teo kosa izy dia tao anatin’ny SP Antananarivo Andrefana.